Mmalite: Ọzọ Kasị Mma nke "ulakpụrụ" Dan Brown | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mmalite (2017) bu akwukwo edemede nke ise nke sayensi putara na prọfesọ a ma ama banyere ihe omuma ihe omuma Robert Langdon. Characterdị akụkọ ifo a mere Dan Brown ka ọ bụrụ otu n'ime ndị edemede kacha ere ahịa n'oge niile. Naanị nke Code Da Vinci (2003) karịrị nde 80 ka erere ruo ugbu a.
Dị ọnụ ọgụgụ ndị a kpaliri mmasị ndị isi na-emepụta Hollywood. N'ezie, ihe nkiri atọ a na-emegharị anya nke Ron Howard duziri site na onye mmeri abụọ nke Oscar: Tom Hanks. Ee OK Mmalite Ọ bụghị otu n'ime ihe nkiri ndị ahụ, eserese ya nwere ike ịbụ naanị oge, n'ihi na aha a ọ nwụọlarị ihe ruru nde abụọ e rere.
1 Nyocha na nchịkọta nke Mmalite
1.2.1 Chukwu, Gaudí na uwa
1.3 Mkpebi na-enweghị atụ
2 Nyocha na echiche
3 The “usoro” Dan Brown
3.1 Robert Langdon, bụ prọfesọ mahadum dị egwu
3.2 Atụmatụ izu ike, obodo ndị mere eme na ndị ibe mara mma
3.2.1 Nkekọ co-star's bonds
3.2.2 Obodo ndị ọzọ akụkọ ihe mere eme kọwara na akwụkwọ ndị Langdon na-agụ
4.1 Mmalite dị ka onye edemede
Nyocha na nchịkọta nke Mmalite
En Mmalite, Dan Brown gosiri ọdịiche dị n'etiti ajụjụ mbụ nke ndị ọkà mmụta sayensị na-ekweghị na Chineke megide ọhụụ nke okike, nke nkwekorita ya na-ebelata kwa ụbọchị na narị afọ XXI. Maka nke a, onye America na-ede akwụkwọ na-eji omume Edmond Kirsch, onye bụbu nwa akwụkwọ nke Langdon mara ezigbo mma. O wuela otutu uba site na ihe omuma ya na uko ya.
Nke ikpeazụ nke nchọpụta Nwa okorobịa ahụ bara ọgaranya na-ekwe nkwa ịza ajụjụ abụọ na-enye ndị mmadụ nsogbu kemgbe ụwa: "Ebee ka anyị si? Ebee ka anyị na-aga? ". A ga-akọwa azịza ha na gala na Guggenheim Museum na Bilbao na ihe ha pụtara nwere ike bụrụ ihe dị oke mkpa n'okpukpe atọ kachasị ukwuu n'ụwa, mana ...
Mmalite (mkpokọta ...
Tupu ihe ngosi ahụ amalite, ọgba aghara malitere n'ihu ìgwè mmadụ ahụ nke ndị ọbịa ma na-agbasa mgbasa ozi maka nde mmadụ na-ekiri gburugburu ụwa. Mgbe ahụ mkpughe mgbanwe ọhụụ nọ n'ihe egwu nke na-apụ n'anya ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi ya, Langdon na Vidal na-amalite ịgba ọsọ siri ike ịchọta paswọọdụ nke na-enye ohere ịnweta nsogbu Kirsch.
Chukwu, Gaudí na uwa
Ndị protagonists rutere na Barcelona, ​​ebe ụlọ Gaudí nwere ike ịbụ isi na echiche ndị na-eto eto nde mmadụ banyere sayensị na okike. O doro anya na Chineke na sayensị na-adị n'otu n'etiti ahịhịa, anụmanụ na injinịa gburugburu nke na-achịkwa ntọala na ogidi nke Katidral nke La Sagrada Familia.
Ọnọdụ ndị ọzọ na isi obodo Catalan nke ọma kọwara nke ọma Brown na Mmalite ha bụ Guggenheim na Casa Milà. O sina dị, Okwesiri ikwuputa na nkowa nke ndi obodo na ochichi nke Spain di anya site na ugbua. Onye edemede nke North America na-egosi Spain dị ka obodo nwere nnukwu okpukperechi ma bụrụkwa onye na-enweghị oke mgbanwe nke Francoism.
Mkpebi na-enweghị atụ
Ihe ọgụgụ isi nke Kirsch kere n'onwe ya pụtara dịka akụkụ dị ukwuu nke nkata ahụ. Na njedebe, ozi nke onye nde nde na-eto eto ka ekpughere ụwa ma duga Langdon ka ọ tụgharịa uche n'ọrụ ndị okpukpe taa.. Amụma ahụ na-arụtụ aka n'okpukpe pụrụ iche, pantheistic, n'ikwekọ na okike ma na-eme ka mmekọrịta dị n'etiti mmadụ niile.
Nyocha na echiche
N'agbanyeghi onu ogugu ederede ya, A boro Brown ebubo na o jiri usoro ịghagharị na akụkọ ya. Ndị ọzọ na-akatọ mkpesa banyere ebubo ebubo akụkọ na-ezighị ezi na akụkọ mejupụtara ya. Dị otú ahụ bụ ihe banyere Jake Kerridge si The Daily Telegraph na Monica Hesse site na The Washington Post, ndị na-akatọ ọrụ New Hampshire.
Otú ọ dị, Brown na-ewedata nyocha ndị na-adịghị mma, n'eziokwu, ọ na-echekarị azaghachi na asusu "maka ndị nkatọ ọ bụla, enwere m puku ndị na-agụ akwụkwọ obi ụtọ." N'echiche a, Janet Maslin si The New York Times (2017) na-agwa ka ị gụọ Mmalite site n'echiche nke ọchị geek. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, Kirsh si Tesla ụgbọala ndebanye aha ad na-agụ, sị: geeks ha g inheritketa ​​uwa ”.
The “usoro” Dan Brown
Robert Langdon, bụ prọfesọ mahadum dị egwu
Dị akụkọ a bụ ọkachamara n'ihe atụ okpukpe na ihe osise na Mahadum Harvard. Ọ bụ nwoke dị nkenke nọ n'ọnọdụ anụ ahụ dị mma - n'ihi omume igwu mmiri mgbe niile - nke nwere olu na-adọrọ adọrọ maka ụmụ nwanyị. O nwekwara ihe ncheta nke eidetic, ọ bara ezigbo uru mgbe ị na-atụnyere akara na idozi ihe omimi dị omimi.
Atụmatụ izu ike, obodo ndị mere eme na ndị ibe mara mma
Onye na-akwado ya na-akpagbu ma na-eyi ya egwu site na onye ọ bụla, ịrọ òtù ma ọ bụ nzukọ nzuzo metụtara ihe nzuzo a ga-ekpughe. Na mgbakwunye, n'ime akụkọ ọ bụla onye nkuzi nwere nkwado bara uru nke onye ibe pụrụ iche, mara mma ma nwee ọgụgụ isi. Na Mmalite, ọrụ ahụ kwekọrọ na Ambra Vidal, onye nduzi nke Guggenheim Museum na Bilbao.
Nkekọ co-star's bonds
Na akwụkwọ akụkọ agụ akụkọ Langdon, onye nke nwanyi nwere udiri nmekorita ya na ihe omimi a nyochara ma ọ bụ bụ nwa nke mmadụ nke akụkọ ihe mere eme pụtara. Mmalite so na ndị ọzọ, ebe ọ bụ na Vidal bụ nwunye nke Prince Julian (nke ga-anọchi nna ya n'ocheeze). Onye nke a na-edebe ihe nzuzo nzuzo metụtara onye ụkọchukwu aha ya bụ Valdespino.
Obodo ndị ọzọ akụkọ ihe mere eme kọwara na akwụkwọ ndị Langdon na-agụ
Rome, na Ndị mmụọ ozi na ndị mmụọ ọjọọ
Paris na London na Code Da Vinci
Washington DC, n'ime Ihe furu efu
Florence, n'ime inferno.
Barcelona, ​​na Mmalite.
Daniel Gerhard Brown bịara na ụwa na Mọnde June 22, 1964 na Exeter, New Hampshire, United States. N'ebe ahụ ka o tolitere na gburugburu ebe okwukwe siri ike nke Anglịkan n'okpuru nlekọta nke nne na nna ya Richard Brown (onye nkuzi mgbakọ na mwepụ) na Constance (onye na-ede abụ dị nsọ). Ọzọkwa N'obodo ya, onye edemede ga-eme n'ọdịnihu nwetara akara mmụta sekọndrị ya na Phillips Exeter Academy na 1982.
Mgbe ahụ nwa okorobịa Daniel malitere ịmụ egwu na ịkọ ihe na Amherts College, otu n'ime ụlọ akwụkwọ kachasị ama ama n'ụwa. Dịka akụkụ nke inweta diplọma ya, Brown nọrọ oge na Europe (España, tumadi). Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na 1985, o dekọtara otu egwu nke egwu ụmụaka (Synthanimals) ma guzobe Dalliance, ụlọ ọrụ ndekọ.
Dan Brown kwagara California na mmalite 1990s na-enwe olileanya ịme ọrụ dịka pianist na onye ọbụ abụ. Ke ukem, ọ na-akụzi klaasị Bekee na Spanish n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị Beverly Hills iji kwado onwe ya. N'oge na-adịghị anya, ọ debanyere aha na National Academy of Composers, ebe ọ zutere Blythe Newlon, onye bụ nwunye ya site na 1997 ruo 2019.
Ka ọ na-erule afọ 1993, ọ malitere ide ihe karịa; ihe si na ya pụta Ebe e wusiri ike dijitalụ (Ebe e wusiri ike dijitalụ) na 1998, akwụkwọ edemede mbụ ya. Mgbe ahụ ha pụtara Ndị mmụọ ozi na ndị mmụọ ọjọọ (2001) - Langdon “mmalite” - na Na izu ọjọọ (2001), tupu ọrụ ntinye nke Brown: Code Da Vinci.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » akụkọ sayensị emeghị eme » Mmalite
Santizọ Santiago. Nhọrọ nke akwụkwọ na akwụkwọ akụkọ